TV-ga LG wuxuu leeyahay oo keliya dekedda USB 2.0 - MediaLight Bias Lighting
Waad ogtahay, waxaan jeclaan lahayn inaan duqsi ka ahaano darbiga kulamada suuqgeynta qaar ka mid ah soo saarayaashaan.
Aynu sameyno TV weyn oo OLED ah oo keliya aan siino USB 2.0 dekado. "
- Qaar ka mid ah naqshadeeye wax soo saarka LG
Waxaa jira xalal yar oo dhibaatadan ah, laakiin waxaan dooneynaa inaan ogaano sida aad marka hore nalalkaaga u isticmaali doontid.
Guud ahaan, qayb kasta oo MediaLight Mk2 ah oo dhererkeedu yahay 1-4 mitir ayaa ka hooseysa 500mA (ugu badnaan USB 2.0) xitaa marka lagu dejiyo 100% dhinaca hoose. Qaybaha waaweyn waxay soo jiidan doonaan amps yar markii loo jajabiyo heerar gaar ah.
Qeybaha waaweyn ee MediaLight waxaan kuugu soo diri karnaa koronto-abuure USB bilaash ah amarkaaga (waxaad u baahan tahay inaad marka hore codsato - wax lacag ah lagama qaadayo) haddii lagu raray amarkaaga. Haddii aad codsato ka dib markii amarkaaga la geeyo, kaliya bixi boostada - ku saabsan $ 3 gudaha Mareykanka). Qalabka wax lagu kobciyaa bilaash kuma ahan LX1. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku dari karnaa mid ka mid ah dalabkaaga kaliya $ 5 ($ 8 haddii la iibsado xaqiiqda ka dib). (The MediaLight, guud ahaan, waxaa ku jira fiilooyin dheeri ah oo ah "walax" dheeraad ah, badal, fog, adabtarad, clips, iwm. Haddii aan dhammaanteed ku darno LX1, waxay ku kacaysaa ku dhowaad inta ay le'eg tahay MediaLight).
Qalabka wax lagu kobciyaa wuxuu isku daraa awoodda labo USB 2.0 si loo siiyo ilaa 950mA oo awood ah - isku aadka ugu sarreeya xitaa 6m Mk2 Flex oo 100% dhalaalaya ah.
Waxaan dadka qaar weydiinay "maxaa diidaya kaliya in koronto-dhaliye amar kasta lagu daro, halkii laga rabay inaan aqrino goobta?"
1) Dadka badankood uma baahna koronto kobciyaha mana rabno inaan kordhino qiimaha MediaLight. Waxaan doorbidi lahayn inaan kaliya kubixino qeybta dheeriga ah bilaash asal ahaan baahida loo qabo.
2) Akhrinta goobta kahor iibsiga marna fikrad xun. Waxaan ku xisaabtameynaa haddii dad badan ay akhriyaan bogga, in aan heli doonno emayl kayar sida "maxaan ugu heli waayey MediaLight-keyga inuu midabbadalo?"
Si kastaba ha noqotee, inta badan macaamiisheennu, si kastaba ha noqotee, waxay ku wareegaan goobta oo ay akhriyaan, taas oo ah sida aad halkan ku timid! Woohoo! Dadyowga sida fiican oo kale ah waxaad ogtahay in alaabtayadu ay yihiin kuwo lagu caddeeyay saxsanaanta oo ay ku jiraan dammaanad dhammaystiran oo xitaa daboolaya rakibaadda la soo rogay. Waad ku mahadsan tahay akhrinta ilaa hadda!